31 | October | 2008 | Moep1's Blog
ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို့ လက်မှတ်ရေးထိုး
(နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို့ In-House Engineering Services အတွက် Agreement of Consulting Services လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အစီအစဉ်အရ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ Conlenco Power Engineering Limited မှ Vice President, Mr. Jeans Francois Belin က လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယင်းနောက် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော် ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို့မှ တာဝန်ရှိသူများက စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီး အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသည် ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို့ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် Agreement of Consulting အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုး ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Comments Off on ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို့ လက်မှတ်ရေးထိုး	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
EP No. 1 Minister meets Chinese guests
(Nay Pyi Taw, 31 Oct, 2008)
Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min received President Mr. Wu Jing of Datang (Yunnan) United Hydropower Developing Co Ltd (DUHD) and party of the People’s Republic of China at the ministry here this morning.
They held discussions on matters related to Tarpein (1) Hydropower Project.
Comments Off on EP No. 1 Minister meets Chinese guests	| တာပိန်(၁) (Tarpain-1)	| Permalink
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for the day Friday, October 31st, 2008.